गजुरेलको कटाक्ष–अब सरकारले ‘श्री ५ ओली सरकार’ लेखेर टांग्न मात्रै बांकी छ ! भिडियाे-Nagarikaawaj.com
गजुरेलको कटाक्ष–अब सरकारले ‘श्री ५ ओली सरकार’ लेखेर टांग्न मात्रै बांकी छ ! भिडियाे
‘दुई तिहाई बहुमत देशलाइ अभिशाप बन्दै,सरकारी संयन्त्र ओलीको फोटो टांस्नमात्रै’ उद्यत
नागरिक आवाज/१५ मंसिर, बुटवल ।
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले कम्युनिष्टको दुइतिहाइ बहुमत देशका लागि अभिशाप भएको दाबि गरेका छन् ।
‘यो सब हुदाहुदै पनि यो सरकार ढल्नेवाला छैन,दुभाग्र्य,संबिधानमै यस्तै ब्यबस्था छ,ओलीको तानाशाहि शैली र प्रमुख प्रतिपक्षी रुजेको बिरालो जस्तो भो’ गजुरेलले भने ।
रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश ५ बुटवलमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने —‘अहिले सरकार नया युगको कुरा गर्दै पोल पोलमा फोटो राख्ने गरिएको अव श्री ५ केपी ओली लेख्न मात्रै बँकी छ ’ । नेपाली काग्रेसले पनि प्रतिपक्षको भुमिका देखाउन नसक्दा भिजेको विरालो जस्तै भएको उनको तर्क रहेको छ ।
उनले ओली सरकारले जतिसुकै गम्भिर गल्ती गरेपनि दुई तिहाईको सरकार हट्न नसक्ने अवस्था रहेको कारण जनतामा निरासा छाएको उनको भनाइ छ ।
९ महिनामा सरकारले राष्ट्रिय स्वाधिनताको उपहास गर्याे
९ महिनामा सरकारले नै देशमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको उपहास गरेको भन्दै जसले बितृष्णा जगाउने काम गरेको बताए । उनले भने–‘ बामपन्थी पनि होइन,प्रतिक्रियाबादीहरुको सरकार बन्यो ।
’सरकारले राष्टियताको उपहास गरेको भन्दै नक्सामा कालापानी गायव गर्नु राष्ट्रको नाममा गद्धार गरेको उनको अरोप छ । सरकारले कम्युनिष्ट कै नाममा कम्युनिष्टकै उपहास गरेको दाबि उनको छ ।
करको दायरा फराकिलो बनाउने बहानामा दुनियामा नै नभएको विभिन्न दरहरु बढाएकोमा उनको आपत्ती छ ।
देशका समस्याहरु समाधान गर्नुको सट्टा सरकारले सेवा सुविधा बढाउन तर्फलागेको भन्दै उनले सरकार नै फेल भएकोे दावि गरे । निर्मला पन्त हत्या काण्डमा सरकार पुर्णरुपमा नै असफल भएको नेता गजुरेलको दावि छ ।
अव विस्तारै यो घटनालाई अन्तराष्ट्रियकरण हुन थालेको भन्द यसमा देशको अवस्था के कस्तो भन्ने विषयमा जनताले बुझ्ने बेला आएको बताए ।
उनले सरकारले शिक्षामा माफियाकरण गरेको भन्दै गोविन्द केसीको माग पुरा गर्न नसक्नु आफैमा लज्जाको विषय भएको बताए । उनले भने –‘माफियाहरुकै कब्जामा देश रहेको छ, दलाल र नोकरसाही पुँजीपतीको कब्जामा देश गैसक्यो । ’
राष्ट्रपतीले १८ करोडको गाडी किन्नु गरिब जनतालाई उपहास गर्नु बाहेक केही नभएको नेता गजुरेलको भनाई रहेको छ । अस्पतालमा विरामीहरुको विजोग रहेको बेला जनताको सेवा भन्दा पनि सेवा सुविधा वृद्धिमा लागेको भन्दै उनले हेलीप्याड सहितको राष्ट्रपती निवास बनाउन खोज्नु आफैमा लज्जाको विषय भएको आरोप लगाए ।
साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता गजुरेलले अव वृहत आन्दोलनको आधिवेहेरीको आवश्याकता बढ्दै गएको बताएका छन् । अहिलेको सरकारले गरेका विभिन्न गैरनैतिक कुरालाई दबाब दिनको लागि पनि आन्दोलनको आधिवेहेरीको आवश्याता रहेको बताए ।
उनले देशभक्त गणतान्त्रीक मुक्ती मोर्चा नै बनाएर लागिरहेको भन्दै अव संघर्षको आन्दोलनको तयारी गरिएको बताए । स सनो संघर्षबाट अगाडी बढ्दै गएर जनआन्दोलनको तयारी गरिएको बताए ।
जनआन्दोलन, जनसरकार र अर्को आन्दोलनको आवश्यकता रहेको भन्दै अव संघर्षलाई एउटा पाटो बनाएर संघर्षको संखघोष गरिएको नेता गजुरेलको दावि रहेको छ ।
रामकुमार क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन कपिल ज्ञवालीले गरेका थिए ।
भिडियाे हेराैं :-